Celtra: Shandura iyo Ad Kubata Dhizaini Maitiro | Martech Zone
Sekureva kweForrester Consulting, pachinzvimbo cheCeltra, 70% yevatengesi vanopedza nguva yakawanda kugadzira zvigadzirwa zvemadhijitari kupfuura zvavaisarudza. Asi vakapindura vakaona kuti otomatiki kugadzira kwekugadzira kuchave nekukanganisa kukuru mumakore mashanu anotevera pane kushambadzira dhizaini, ine mhedzisiro pane:
Huwandu hwezvishambadziro (84%)
Kuvandudza maitiro / kufambiswa kwemabasa (83%)
Kuvandudza kukosha kwekugadzira (82%)
Kuvandudza mhando yekusika (79%)
Chii chinonzi Creative Management Platform?
Iyo yekugadzira manejimendi chikuva (CMP) inosanganisa akasiyana siyana ekuratidzira ekushambadzira maturusi anoshandiswa nekushambadzira uye kushambadza nyanzvi mune imwechete yakabatana, yegore-yakavakirwa papuratifomu. Aya maturusi anosanganisira ekushambadzira vavaki vanokwanisa kugadzira masimba ekugadzira muhuwandu, muchinjiko-chiteshi kutsikisa, uye kushambadzira kuunganidzwa kwedata uye kuongorora.
G2, Creative Management Mapuratifomu
Celtic ndiwo Kubata Management Platform (CMP) yekugadzira, kushanda pamwe, uye kuwedzera kushambadzira kwako kwedhijitari. Zvekugadzira, midhiya, kushambadzira, uye maimendi zvikwata zvine nzvimbo imwechete yekukwirisa mishandirapamwe nehunyanzvi hwekugadzira kubva kumatekiniki epasi rese kuenda kune vezvenhau vemuno. Nekuda kweizvozvo, mabrand anokwanisa kudzora nguva yekugadzira uye nekudzora zvakanyanya kukanganisa.
Mhiri kwebhodhi, takaona kushambadza uye timu dzekugadzira dzichirwira kana zvasvika pakugadzira, kugadzira, uye kutanga mishambadziro yekushambadzira pamwero. Vashambadziri uye maCompact Operations zvikwata vari kushingairira kutsvaga software yekuvandudza mashandiro, kufambiswa kwebasa, chiyero uye kukosha kwezvavanoburitsa.
Mihael Mikek, Muvambi & Chief Executive Officer weCeltra
Nepo mabrands ari kunetsekana kuenderana nezvinodiwa zvekugadzira zvekushambadzira uye kushambadza kwanhasi, iyo data yakaratidzawo mhinduro dzinoverengeka dzaizozadza maburi mumaitiro avo azvino nekushandira nzvimbo dzakasiiwa dzisina kufumurwa nemaitiro avo aripo. Paunenge uchifunga nezve kugona uko kunonyanya kutsigira kugadzirwa uye kuyerwa kwemadhijitari ekushambadzira zvemukati, vakapindura vakada:
Chikwata chakabatana chekutarisa kugadzirwa, mashandiro, uye mashandiro (42%)
Zvekugadzira zvemukati zvinochinja zvinoenderana nedata (35%)
Yakavakwa-mukati metric / kuyedza (33%)
Imwe-tinya yekugadzira yekuparadzira kune ese mapuratifomu uye chiteshi (32%)
Kuguma-kumagumo kufambiswa kwemabasa kwema multichannel dijitari yekugadzira (30%)
Kiyi Celtra Zvimiro Zvinosanganisira:
Gadzira - Kuburitsa kwekugadzira iyo inogadzirwa zvine simba uye inotungamirwa nedata. Iyo chikuva igore-rakavakirwa kune chaiyo-nguva yekugadzira yekugadzira. Dynamic yekugadzira vashambadzi vavaki uye vhidhiyo vavaki vane zvechivanhu, zvekupindirana zviitiko. Kuvakwa kwetemplate uye manejimendi nehunhu vimbiso (QA) maficha akavakirwa mukati.
Zvigadzirise - Gamuchira kutonga kwakazara pamusoro peako dhizaini yekugadzira yekugadzira uye mashandiro maitiro kuburikidza nepakati, gore-rakavakirwa chikuva. Zviratidziro zvekubatana maturusi ne setup uye previews zvinosanganiswa kune yekushambadzira dhizaini. Kugadzirwa kweaseti kutakurika kunowanikwa pane zvese zvigadzirwa uye mafomati. Kugovera kunowanikwa kune vezvenhau uye mapuratifomu ane scalable mushandirapamwe wekufambisa manejimendi uye izere neplatifomu yekubatanidza mune yeAd tech stack.
Pimha icho - Aggregate data rekugadzira pamatanho kuunza mashandiro edhata kumatimu ekugadzira uye nekupa data rekugadzira kumapoka enhau Iyo chikuva ine yakajairwa kuratidzwa uye vhidhiyo metric, mushumo anovaka uye visualization kuburikidza nedashboard. Kune zvakare yakawanda yekuburitsa kunze kana yekuzivisa API yekubatanidza mashandiro ekuita.
Tags: kushambadzira kwekugadzirakushambadzira kwekugadziraCelticCMPchii cmp